May 2022 | RatoTara.com Websoft University
गाईघट –६ जेष्ठ। रातो तारा डट कम,पहिलो पटक स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर लोपोन्मुख हायू समुदायका ३९ वर्षिय अनन्त हायू जनप्रतिनिधिमा चुकीएकाछन् । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–११ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भए संगै हायू समुदाय बाट जनप्रतिनिधि हुने उनी पहिलो बनेकाछन् । नेकपा (एमाले ) बाट उम्मेदवार बनेका उनले कागे्रस र माओवादीको गठवन्धन बाट उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका दिपक बुढाथोकीलाई ३ मतको अन्तरले पराजीत गरेका हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित बुडाथोकी ले ४ सय १२ मत पाउदा उनले ४ सय १५ मत पाएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएकोछ । अघिल्लो चुनावमा पार्टीको उम्मेदवार पराजीत भएपछि संगठनको काममा बढी केन्द्रीत भएर वडामा खटेकोले परिणाम आपूm अनुकुल ल्याउन सफल भएको उनले बताए ।हायू एसएलसी उतिर्ण गरेर भेटेनरी र जेटिए अध्यन गरी गाउमै बसेर काम गर्दै आएका थिए । कृषकले बोलाए पछि दिन रात नभनी उनी सेवामा निरन्तर खटी रहने उनले जीतको प्रमुख आधार पनि गाउघरमा पु¥याएको सेवा नै रहेको हायू बताउछन् । उनले लोपोन्मुख हायू समुदायको उल्थान को लागी विशेष कार्यक्रम ल्याएर काम गर्ने बताए । त्यसैगरी वडामा खानेपानी , स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा बढी– जोड दिने उनले बताए ।उनले नेकपा एमालेको सदस्यता २०६४ सालमा लिएका थिए। पार्टी सदस्य बनेपछि उनी फुर्सदको समयमा निरन्तर पार्टिको काममा खट्दै आएको पार्टि अध्यक्ष परमेश्वर घिमीरेले बताए । जिल्लाकै विकट पहाडी भेग मानीने वडा न.११ मा हायू समुदायको ५ घर परिवार बाट ३५ जना मतदाता रहेको छ ।
रंगेली मा पुनः मतगणना स्थगित ।
बिराटनगर जेष्ठ ६ शुक्रबार । रातो तारा डट कम,रबिन्द्र बराल -माेरङकाे रंगेली नगरपालिका मा मतगणना स्थगित भएको छ । मतगणना गर्ने क्रममा रंगेली ७ काे मतपेटिका खल्दा खेरी खसेकाे मत भन्दा १ सय ७ मत भेटिए पछि विभिन्न पाटिका कार्यकर्ता हरु ले बिराेध गरेका छन । अहिले बडा हरु काे मतगणना स्थगित भएको छ । रंगेलीको वडा नं ७ को २,१३३ मतगणना भइसकेको थियो । गन्न बाँकी १,२१६ थियो । तर, ३,२४२ मत खसेकोमा जम्मा मत ३३४९ मत भेटिएपछि सबै बडा काे मतगणना बन्द भएको हाे । उनी हरु ले बिहन मतगणना स्थलकाे गेट अगाडि टायर बालेर बिराेध समेत गरेका छन । निर्वाचन अधिकृत रामहरि काफ्ले का अनुसार बडा नम्बर ७ बाट १० बटा मतपेटिका आफू हरु ले बुझिलिएकाे र मतगणना गरेर कम्पुटर मा सिट मिलाउ ने क्रममा १ सय काे एक मुठ्ठा बडि कम्पुटर मा एन्ट्रि भएको भएको समेत बताए । उनलेे भने साे भन्दा पहिला गणना गरिएको मतपत्र पुनः गन्ति गर्दा मतपत्र बडि नहुने समेत बताएका छन । (रंगेली अबडेटबाट लिएको हो)
पूर्वाञ्चल खबर , मुख्य समाचार , मोडल
बिराटनगर, २०७९ जेठ ६ गते । रातो तारा डट कम ,झापा र मोरङका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा बिहिवार भएको सवारी दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका(२ रामचोकमा प्रदेश १(०१(००१ ख ३५९४ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिंदा पैदल यात्री बिर्तामोड(४ का ५२ बर्षीय टंक काफ्लेको मृत्यु भएको हो । सडकमा रोकीराखेको ट्रक सडकमा निकाल्नका लागी ब्याक गर्ने क्रममा ट्रकको पछाडीको भागले ठक्कर दिंदा घाईते भएका काफ्लेलाई उपचारको लागी बिर्तासिटी अस्पताल लगिएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको तथा चालक र ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले जनाएको छ । यसैगरी मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका(६ मा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहिवार दिउँसो अमरदहको भित्री सडक खण्डमा को २ त १४३७ नम्बरको ट्याक्टर आफै अनियन्त्रीत भई सडकमा दुर्घटना हुँदा घाईते भएका सुनवर्सी नगरपालिका(५ का ४५ बर्षीय राज कुमार सरदारलाई उपचारको लागी बि।पी। कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान घोपा लगिएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय रङगेलीले जनाएको छ ।
बालेनको २६ हजार ९ सय २८ मतसहित अग्रता कायमै
काठमाण्डौ जेठ ६ गते । रातो तारा डट कम, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साहले बालेनले २६ हजार ९ सय २८ मतसहित अग्रता कायम गरिहनु भएको छ । बालेनपछि नेकपा एमालेका केशव स्थापितले १४ हजार १ सय ६५ मत ल्याउँदा काँग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १३ हजार ५ सय ६२ मत ल्याउनुभएको छ । यस्तै उपमेयरमा एमाले उम्मेदवार सुनिता डंगोलले २५ हजारभन्दा धेरै मत ल्याउनुभएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल आजबाट सुरु
काठमाण्डौ जेठ ६ गते । रातो तारा डट कम, बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल आजबाट सुरु हुँदैछ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गएरातिदेखि सकिएपछि नवनिर्वाचितहरूको कार्यकाल आजबाट सुरु हुन लागेको हो । निर्वाचित भएकाहरूमध्ये कतिपयले हिजो नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् भने कतिपयले आजै शपथको कार्यक्रम राखेका छन् । नेपालको संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थाको परिकल्पना नगरेका कारण निर्वाचित भएकालाई आजैबाट कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायलाई आयोगले निर्देशन गरिसकेको जनाएको छ ।
६,२५ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक हुदा नेपाली काँग्रेस अगाडि
काठमाण्डौ जेठ ६ गते । रातो तारा डट कम,बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम दैनिक सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिले सम्म ६ सय २५ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले २ सय ७८ स्थानीय तह बिजय गरेको छ भने ४५ स्थानमा अगाडी आउदै छ । नेकपा एमाले १ सय ७४ पालिकामा विजयी गरिसकेको छ भने २४ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ । माओवादी केन्द्रले १ सय ११ स्थानमा बिजय हासिल गरेको छ भने १० स्थानमा अगाडी रहेको छ । अन्यले २३ जनाले स्थानीय तह प्रमुख पदमा बिजय गरेका छन भने ११ स्थानीय तहमा अगाडी रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले १८ स्थानमा बिजय गरेको छ भने १७ स्थानमा अगाडी रहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले १४ स्थानमा बिजय गरेको छ भने ५ स्थानमा अगाडी रहेको छ । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ७ स्थानमा विजयी हुँदा ५ स्थानमा अगाडी आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले २४,६३३ मत पाए, मतगणना जारी छ
काठमाडौं । रातो तारा डट कम, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले २४,६३३ मत पाएका छन् ।
उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका केशव स्थापितले १३,०३७ र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले १२,२७२मत पाएकीछन् ।
सहकार्य नभए धरानको विकास अघि बढ्दैनः मेयर राई
धरान । रातो तारा डट कम, नयाँ निर्वाचित भई आउने नगर प्रमुखका लागि आज विहीबारदेखि धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयको कुर्सी खाली गरिएको छ । मेयर तिलक राईले आज विदाई ज्ञापन कार्यक्रम आयोजना गरी नगर प्रमुख सहितका नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु खाली भएको घोषणा गरेका हुन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पद बहाली नगरेसम्म शुक्रवारदेखि उपमहानगरपालिका कार्यालयको दैनिक काम कार्बाही कर्मचारीहरुबाट सञ्चालन हुनेछ ।
चुनावमा प्रत्याशी हुन राजिनामा दिएका बाहेक वडाध्यक्ष बहाल रहेका ७ जना वडाध्यक्षले पनि आजैदेखि उपमहानगर कार्यपालिकाबाट विदाई लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको चुनावमा निर्वाचित स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ गते सकिने जानकारी गराएकोले सोही अनुसार विदाई ज्ञापन गरिएको बताउँदै मेयर राईले भने ‘हामी बहाल रहेकाहरुले नयाँ नगर प्रमुख, उपप्रमुख र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पद बहाल गराई विदा लिने सोचेका थियौं तर नियमले त्यसो गर्न दिएन ।’
मेयर राई भने तत्कालिन नगर प्रमुख तारा सुब्बाको निधन भएको डेढवर्षपछि उपचुनावबाट निर्वाचित भएका हुन् । उपमहानगरपालिकामा दुई तिहाई भन्दा बढी विपक्षी दलको बहुमत भएपनि सहमति र सहकार्यमा आफ्नो अढाई वर्षे कार्यकालले निर्विवाद पूर्णता पाउनुु नयाँ आउने जनप्रतिनिधिहरुका लागि उदाहरणिय विषय बन्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सहमति सहकार्य नभए धरानको विकास र निर्माणका कार्यहरु अवरुद्ध बन्न सक्ने र धरान पछि पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
अल्पकालिन कार्यकालका कारण खानेपानी जस्तो धरानको मुख्य योजनालाई पूर्णता दिएर समस्या समाधान गरेर देखाउने अवसर नपाएको बताउँदै उनले भने ‘पाँच वर्षको पुरा अवधि कामगर्न पाएको भए, उपमहानगरपालिकाले अघि बढाएको प्रायः सबै योजनाहरु परिणाममुखी अवस्थामा पु¥याउन सक्न्थ्यिो भन्ने अहिले मलाई लागेको छ ।’ दिवंगत तारा सुब्बाको कार्यकालमा कानुनहरु बनाउने केही कामहरु भएको उल्लेख गर्दै मेयर राईले भने, ‘डेढवर्ष कार्यवाहक नदिई तत्कालै चुनावबाट आउन पाएको भएपनि कमसेकम खानेपानीको काम पुरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ सुब्बाको निधनपछि उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी डेढवर्ष कार्यवाहक नगर प्रमुख भएकी थिइन् ।
मेयर राईले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार रोक्ने, विकास निर्माणका योजनाहरु लागत स्टीमेट भन्दा घटिमा सम्पन्न गर्ने, ठेक्का लगाउने काम भएकोले अनियमितताका गन्धसम्म नआएको कुरा सन्तोषको विषय भएको बताए । लामो समय विवाद र बजेटको अभाव भई रोकिएको बसपार्कको योजना परिमार्जन गरेर भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै एयरपार्टको कुरा भने पटक पटक उठाएर धरानबासीलाई भ्रममा राख्न नहुने उनको भनाई छ । मेयर राईले भने, ‘सरकारको नीति निर्माण तह यो एयरपोर्टका विपक्षमा छ, त्यस्मा बल गर्नु जनतालाई भ्रममा राख्नु मात्र हुनेछ ।’
संघीय गणतन्त्र आएपछि तिन तहको सरकारले घरघरमा सिंहदरबार पु¥याउने भनिएतापनि स्थानिय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकार जस्तो अधिकार सम्पन्न नगरिएको आफ्नो अनुभव उनले सुनाए । मेयर राईका अनुसार स्थानिय सरकार भनिएपनि प्रदेश र संघीय जस्तो सरकार बनाउने अधिकार नगरपालिकालाई नहुँदा विकास, निर्माण, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गतिशिल बनाउन नसकिएको अवस्था छ । उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मेयरले कार्यपालिका सदस्यहरु मध्येबाट ७ जनाको स्थानिय सरकार बनाउन पाए कामको जिम्मेवारी बाँडफाड भई तिब्रता पाउन सक्थ्यो ।’ आफुले इमान्दार, परिणाममुखी कामगर्ने नगर प्रमुखको रुपमा काम गरेको बताउँदै नगरपालिकाको अनुभव अझैपनि धरानको विकासमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
विदाई ज्ञापन कार्यक्रममा धरान–२ का निवर्तमान वडाध्यक्ष माधव गोविन्द श्रेष्ठ, वडा नं. ११ का बाबुलाल लामा, महिला सदस्य हिरादेवी राई, सल्लाहकार आनन्द आचार्य लगायतले अनुभव सुनाउँदै मेयर तिलक राईको कार्यकाल उदाहरणिय रहेको बताए । सोही अवसरमा उपमहानगरपालिकाबाट धरानको इतिहास र वर्तमान झल्काउने विभिन्न पक्षमा प्रकाश पारिएका खोजमुलक लेखहरुको पुस्तक ‘धरान निरुपण’ मेयर राई र पुस्तकका प्रधान सम्पादक प्रा.डा. टंकप्रसाद न्यौपानेले विमोचन गरेका थिए ।
विवाद को कारण त्रियुगाको मतगणना अझै हुन सकेको छैन
गाईघाट –५ जेष्ठ । रातो तारा डट कम,त्रियुगा नगरपालिका–१२ को जनपे्रमी आधारभुत विध्यालय मतदान केन्द्रमा भएको विवाद को कारण त्रियुगाको मतगणना अझै हुन सकेको छैन । निर्वाचन भएको ५दिन भैसक्दा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत को कार्यलय बाट कुनै ठोस निर्णय नभएपछि मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार चित्र बहादुर कार्कीले मतगणना गरीपाउ भनी उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दिएकाछन् । उच्च अदालतले विहीवार उक्त रिटमा निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भनेर अल्पकालिन अन्तरीम आदेस जारी गरेको छ । न्यायाधिश राजन प्रसाद भट्टराई को एकल इजालस ले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लाई कारण देखाउ आदेस र अन्तरीम आदेस गरेको छ। मेयर उम्मेदवार कार्कीले अदालत बाट जेष्ठ ९ गते छलफलको लागी दूवै पक्ष लाई बोलाउने आदेस भएको बताए । मतदान को क्रममा कर्मचारीले वदमासी गरेको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादीले विरोध जनाएपछि वडा.न १२ मा निर्घारीत समय भन्दा एक घण्टा अघि मतदान स्थगीत भएको थियो । एकिकृत समाजवादी र माओवादीले उक्त वडा मा पुःन मतदानको माग गर्दैै आएकाछन््भने नेपाली कागे्रस, नेकपा एमाले र राप्रपा लगायतका अन्य साना पार्टिहरुले मतगणना गर्नु पर्ने माग उठाउदै आएकाछन् । तर निर्वाचन आयोगले अहिले सम्म सो विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपाली कागे्रस उदयपुुरले विहीवार एक पे्रस वीज्ञप्ती प्रकाशित गरी आजको मिती सम्म मतगणना गर्ने वा पुःन निर्वाचन गर्ने भन्ने वारे मा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसकेको प्रती गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टि सभापती हिमाल कार्की द्धारा जारी पे्रस वीज्ञप्तीमा तत्काल यस विषयमा निर्णय गरी मतगणना सूचारु नगरिए नेपाली कागे्रस उदयपुर आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख छ ।
उदयपुरको चौढण्डीगढी नगरपालिकामा प्रमुख र उप–प्रमुख नेकपा (एमाले) ले जित हासिल गरेको छ
श्याम राई÷उदयपुर गाईघाट, ५ जेष्ठ। रातो तारा डट कम, उदयपुरको चौढण्डीगढी नगरपालिकामा प्रमुख र उप–प्रमुख नेकपा (एमाले) ले जित हासिल गरेको छ ।
कांग्रेस क्षेत्र न. १ उदयपुरका सभापति एंवम चौढण्डीगढी नपाका निवर्तमान प्रमुख खग्रेन्द्र ( काजी ) राईलाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदबार कालु लामा प्रमुख पदमा निर्वाचित भएकाछन् । लामाले ८८६३ मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्धन्दि नेपाली कांग्रेस राईले ८०१२ मत ल्याएका थिए । त्यसैगरि उप–प्रमुखमा एमालेकी मणिका दुलालले विजयी भएकी छिन् । उनले निर्वतमान उप–प्रमुख नेपाली कांग्रेसको उम्मेदबार रिता चौधरीलाई हराउँदै निर्वाचित भएकी हुन् । दुलालले ९५६६ मत पाईन् भने निकटतम प्रतिद्धन्दी चौधरीले ७७६० मत प्राप्त गरिन् ।
झापा, २०७९ जेठ ५ गते । रातो ताारा डट कम,झापाको मेचीनगर नगरपालिका(६ पुरानो मेचीपुल छेउबाट अबैध सुन सहित १ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुधवार दिउँसो साँढे १ बजेको समयमा भारतबाट नेपाल तर्फ आँउदै गरेका कैलाली घर भई दमक नगरपालिका(२ मा बसोबास गर्दै आएका ३३ बर्षीय धिरेन्द्र जैसीलाई अबैध रुपमा नेपाल भित्र्याउदै गरेको सुन सहित पक्राउ गरेको हो । बिशेष सूचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शंकास्पद रुपमा पैदल भारतबाट नेपाल तर्फ आउँदै गरेका जैसीलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उनको साथबाट ३४९।७०० ग्राम ९ हालको बजार मुल्य अनुसार २८,८७,१८२।६५० रुपैयाँ बराबरको सुन बरामद गरेको हो । सुन सहित पक्राउ परेका जैसीलाई आवश्यक कारवाहीको लागी मेची भन्सार कार्यालय बुझाईएको ईलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाले जनाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा नेपालले आज युगान्डा प्रतिस्पर्धा गर्ने
काठमाण्डौ जेठ ५ गते । रातो तारा डट कम, नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले आज तेस्रो टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय खेलमा पाहुना टोली युगान्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन । आज दिउसो १ बजे सुरु हुने बताइएको छ । नेपाल आज युगान्डालाई हराउँदै सिरिज जोगाउने लक्ष्यमा रहने छ । पाँच खेलको सिरिजमा युगान्डा २–० ले अघि रहेको छ । पहिलो खेलमा युगान्डाले नेपाललाई १२ रनले हराएको थियो । यस्तै दोस्रो खेलमा नेपाल युगान्डासँग १ विकेटले पराजित भएको थियो । त्यसैले सिरिज जोगाउन नेपाललाई आज युगान्डाविरुद्ध जितको विकल्प छैन । यता, युगान्डा भने नेपाललाई हराएर दुई खेल अगाबै सिरिज जित्ने प्रयासमा रहेकोछ ।
स्थगित भएका १४ मतदान केन्द्रमा छिटै पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको भनाइ
काठमाण्डौ जेठ ५ गते । रातो तारा डट कम, निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार विभिन्न कारणले स्थगित भएका १४ मतदान केन्द्रमा छिटै पुनः मतदान गराउने तयारी गरेको छ । आयोगका अनुसार शुक्रबार देशभरका ७७ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको थियो । जसमध्य हालसम्म २९ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान सम्पन्न भएको छ भने बाँकी रहेको १४ मतदान केन्द्रमा छिटै पुनः मतदान गराउने आयोगले जनाएको छ । रोकिएका बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको १० वटै वडा, बुढीगङ्गाको २, ३, ४, ५, ७ र ९ छन भने उदयपुरको बिबाद समाधान भइ सकेको र निर्वाचन अधिकृत नियुक्ती भइसकेकाले छिटै आयोगको काम सम्मपन्न हुने जनाएको छ ।
५४९स्थानीय तहको मतपरिणाम आउँदा,नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा आउदैछन ।
काठमाण्डौ जेठ ५ गते । रातो तारा डट कम, बैशाख ३० गते शुक्रवार भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम देशभरीबाटै चलिरहेको छ । अहिले सम्म ५४९ स्थानीय तहको मत परिणाम आज आयोगले सार्वजनिक गरेकोे छ ।
नेपाली काँग्रेसले २ सय ४६ स्थानीय तहमा जित हाँसिल गरेको छ भने ७४ स्थानमा अगाडी रहेको छ । नेकपा एमाले १ सय ५५ पालिकामा विजयी हुँदा ४२ स्थानमा अग्रस्थानमा छ । माओवादी केन्द्रले १ सय ४ स्थानमा जित हाँसिल गरेको छ भने १३ स्थानमा अगाडी रहेको छ ।
अन्य तर्फ १९ जनाले स्थानीय तह प्रमुख पदमा जितेका छन् भने १३ स्थानीय तहमा अगाडी छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले १४ स्थानमा जित निकालेको छ भने २० स्थानमा अगाडी रहेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले १० स्थानमा जितेको छ भने १० स्थानमा अगाडी रहेको छ । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एक स्थानमा विजयी हुँदा ११ स्थानमा अगाडी छ ।
बेलका नगरपालिकामा काग्रेसका असोक कार्की निर्वाचित
गाईघाट –४ जेष्ठ । रातो तारा डट कम,उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा गठवन्धन उम्मेदवार काग्रेसका असोक कार्की प्रमुखमा निर्वाचित भएकाछन् । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार दुर्गा थापा लाई पराजीत गर्दै कार्कीले प्रमुख पदमा विजयी हासील गरेकाछन् । अघिल्लो स्थानिय तह को निर्वाचनमा काकी लाई हराउदै थापा प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर यो पटक नेकपा (माओवादी केन्द्र ) संगको गठवन्धन बाट चुनाव लडेका कार्कीले ३ हजार १ सय ४० मतान्तरले थापा लाई पराजीत गरे । कार्कीले १० हजार १ सय २० मत ल्याए भने थापाले ६ हजार ९ सय ८० मत प्राप्त गरे । उप–प्रमुखमा भने गठवन्धन उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका मनोज तामाङमा लाई पराजीत गर्दै नेकपा एमालेकी जिरा राई निर्वाचित भइन् । नगरपालिका मा अधिकृत जागीर छोडेर चुनाव लडेकी उनले ८ हजार २ सय ७६ मत प्राप्त गर्दा उनकी निकटतम प्रतिद्धन्दी तामाङग ले भने ७ हजार ४ सय ९५ मत प्राप्त गरे ।
लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा खतिवडा
विराटनगर, ४ जेठ । रातो तारा डट कम, विराटनगर ४ स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर (जियर शैक्षिक संस्था) मा मंगलबार कुमार खतिवडाको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ ।
समितिका उपाध्यक्षमा देवराज सुवेदी, महासचिव युवराज धिताल, कोषाध्यक्ष रमेश आचार्य र सचिवमा लालमोहन ठाकुर चयन भएका छन् । त्यसैगरी मन्दिरका सदस्यहरुमा शिशिर सुवेदी, देवेन्द्र गुप्ता, मनोज भट्टराई, पुरुषोतम रेग्मी, सुरजा न्यौपाने र सुधा घिमिरे चयन भएको कमिटीले जनाएको छ ।
सभामा स्वामी रामानुज नेपाल, स्वामी खगेन्द्रप्रसाद पोखरेल र शम्भु सुवेदीलाई सल्लाहकारमा मनोनित गरेको छ । समितिले कार्यसमितिको पूर्णता दिने र मन्दिरका नामबाट बैंक खाता खोल्नेसमेत निर्णय गरेको समितिका उपाध्यक्ष देवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
कार दुर्घटनामा घाइते चापागाईको उपचारका क्रममा मृत्यु
गाईघाट –४ जेष्ठ । रातो तारा डट कम,उदयपुरगढी गाउपालिका –६ नेपालटार दनुवारबेसी को बैधनाथ खोलाको पक्कीपुल स्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा मंगलबार राती भएको कार दूर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएकोछ । साथै अन्य चार जना घाइते भएकाछन् । विरगञ्ज देखी विराटनगर तर्फ आउदै गरेको वा ० २५ च ७८१९ नम्वरको कार आफै अनियन्त्रीत भएर सडक देखी झन्दै १५÷२० मिटर तल खोल्सीमा खस्दा विराटनगर महानगरपालिका वडा.न. ५ चादनीचौक बस्ने ३४ बर्षिय डेविट भन्ने देवेन्द्र चापागाईको जिल्ला अस्पताल ै उदयपुरमा उपचारको क्रममा राती नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दूर्घटनामा चालक विराटनगर महानगरपालिका –५का ३१बर्षिय बिशाल राया, सोही ठाउका बर्ष २३ का सुजन खत्री, २७ बर्षिय सागर श्रेष्ठ र बर्ष ३५ को सुरज पौडेलको विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका डिएसपि संतोष आचार्यले बताए । मृतक को शव जिल्ला अस्पतालमा राखीएको छ । पोष्टमार्टम पछि आफन्त लाई शव बुझाउने तयारी भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत निर्वानको भन्दा यो स्थानिय तहको निर्वाचनमा बदर मतको संख्य बढ्ने संकेत देखिदै,
काठमाण्डौ जेठ ४ गते । रातो तारा डट कम, निर्वाचन आयोग र सरकारले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन नसक्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मत प्रतिशत गत निर्वाचनहरुको भन्दा धेरै बढ्ने देखिएको छ । निर्वाचनको विवरण आइनसकेका ठाउको अवस्था र मत सङ्ख्या कति बदर भयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क आइनसके पनि मतगणनामा खसेका मतका आधारमा सबै गन्ती भइरहेका ठाउमा धेरै मतहरु बदर भएको पाइएको छ । दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आरोपप्रत्यारोपका कारण यसपालीको चुनावमा मतदाताको मत खसाउन जानेको संख्य पनि कम भएको छ भने दलहरुको गलत क्रियाकलाव देशमा भ्रष्ट्रचार बढ्नु जस्ता कुराहरुले नेपाली मतदाता पाटी प्रति बितृष्णा फैलाएको त होइन भन्ने जस्ता प्रश्न अहिले समाज बहसको बिषय भएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण समितिले पनि ढाक छोप नगरि सरकारलाई सहि सुझाव पछि दिनु पर्छ ।
सर्वदलीय बैठकले रोकिएको मतगणना खोल्न पहल हुदै,
काठमाण्डौ जेठ ४ गते । रातो तारा डट कम,मुख्य निर्वाचन कार्यालय धुलिखेलमा मतगणना रोकिएको छ । हिजो बेलुकी ५ बजेदेखि रोकिएको मतगणना अझै सुरु हुन नसके पनि छिटै सुरु हुने भनिएको छ । आज बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाइएको भएपनि बैठक सुरु भएको छैन । धुलिखेल वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मको मतगणना सकिए पनि थप गणना गर्ने क्रममा केही विवाद आएपछि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर मतगणना रोकिएको कुरा समचामा उल्लेख गरिएको छ ।
मोटरसाईकल चोरी गर्ने गिरोहहरू पक्राउ
अपराध , पूर्वाञ्चल खबर , फोटो राजनीति , मुख्य समाचार
बिराटनगर जेठ ३ गते । रातो तारा डट कम, विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित नोवेल अस्पताल अगाडी, विराटनगर वडा नं. ५ तोदी भवन लगायत विभिन्न स्थानबाट मोटरसाईकल चोरी गरी किनवेचमा संलग्न रहेका निम्न ब्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोटरसाईकल सहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भई रहेको छ ।
निम्न चोरी गर्ने समूह :--
जिल्ला मोरङ जहदा गाउँपालिका वडा नं. १ बुधनगर बस्ने बर्ष २०को हरिओम मण्डल ।
जिल्ला मोरङ विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ४ कन्चनबारी बस्ने बर्ष २२ को प्रकाश राजबंशी ।
जिल्ला मोरङ जहदा गाउँपालिका वडा न. १ बस्ने बर्ष २० को पन्नलाल राजबंशी ।
जिल्ला मोरङ जहदा गाउँपालिका वडा नं. १ बुधनगर बस्ने बर्ष १८ को विशाल राजबंशी ।
जिल्ला मोरङ कटहरी गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने बर्ष २४ को मनिष बस्नेत ।
किनवेच तथा व्यवस्थापन गर्ने समूह :--
जिल्ला धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं।(९ बस्ने बर्ष ३२ को थाम बहादुर राई ।
जिल्ला धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं।(९ बस्ने बर्ष ३५ को मनकाजी राई ।
बरामद मोटरसाईकलहरू :--
बजाज कम्पनीको २२० सिसिको पल्सर 1-02-046 प 640 ।
बजाज कम्पनीको १२५ सिसिको पल्सर प्र.1-02-047 प 3924 ।
RTRअपाची को १३ प ८२७५ ।
होण्डा कम्पनीको साईन BR 38 D 4504 ।
बजाज कम्पनीको १५० सिसिको पल्सर प्र.१-02-044 प 257।
सुपर स्पीलेण्डर को ८ प ६७५ । BR 38 Z 8972 ।
स्थगित ८७ मतदान केन्द्रमध्ये थप ४ मतदान केन्द्रमा पुनःआज मतदान हुदै
काठमाण्डौ जेठ ३ गते । रातो तारा डट कम, निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार वैशाख ३० गते स्थगित ४ मतदान केन्द्र पुनः आज मतदान हुने भएको छ । देशभर स्थगित भएका ८७ मतदान केन्द्रमध्ये आज थप ४ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान सुरु हुने भने, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर १३ को श्रीराम मावि मतदान केन्द्र, कञ्चनपुरको पनुर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर १० को विजय मावि मतदान केन्द्र, बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ को पिस क्रिएटर एकेडेमी मतदान केन्द्र र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकलाको वडा नम्बर ५ को नवज्योती मावि मतदान केन्द्रमा आज बिहान ७ बजेबाट पुनः मतदान सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।
काँग्रेसले १ सय १८, नेकपा एमालेले ७०, माओवादी केन्द्रले ५६, एकीकीत समाजवादीले ४, जनता समाजवादीले २ र अन्य तर्फ ८ जनाले प्रमुख र अध्यक्ष पदमा बिजय हासिल गरिसकेका छन ।
काठमाण्डौ जेठ ३ गते । रातो तारा डट कम, वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणा अनुसार २ सय ५८ स्थानीय तहको मतपरिणाम आज ८ बजे आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा नेपाली काँग्रेसले काँग्रेसले १ सय १८, नेकपा एमालेले ७०, माओवादी केन्द्रले ५६, एकीकीत समाजवादीले ४, जनता समाजवादीले २ र अन्य तर्फ ८ जनाले प्रमुख र अध्यक्ष पदमा बिजय हासिल गरेका छन् ।
आजको तथ्याङ्क अनुसार काँग्रेस देशभरका १ सय ९२ प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा अगाडी छ भने एमाले १ सय २२ स्थानमा अगाडी छ । माओवादी केन्द्र देशभरका ५८ स्थानमा अगाडी छ भने एकीकृत समाजवादी १७, जनता समाजवादी २७, लोकतान्त्रिक समाजवादी ११ र अन्य तर्फ २२ जना प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा अगाडी छन् । यस्तै उप प्रमुख तथा उपाध्यक्ष तर्फ काँग्रेसले १ सय १४ स्थानमा जित हात पारेको छ भने १ सय ६५ स्थानमा अगाडी रहेको छ ।
एमाले भने ७५ स्थानमा विजयी भएको छ भने १ सय ४५ स्थानमा अगाडीरहेकोछ । यस्तै माओवादी केन्द्रले ५१ स्थानमा जित हात पारेको छ भने ७६ स्थानमा अगाडी रहेको छ । एकीकृत समाजवादीले ९ मा जित हात पारेको छ भने १३ स्थानमा अगाडी छ, जसपा ४ स्थानमा विजयी भएको छ भने २६ स्थानमा अगाडी छ, लोसपाले उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षमा हालसम्म जित हात पारेको छैन । तर, ९ स्थानमा अगाडी छ । अन्य तर्फ ४ जनाले जित हात पारेका छन् भने १४ स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ ।
सुन्दरहरैंचा १२ मा नेकपा एमाले तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेद्वार रोशनप्रसाद ढकाल भारी मतले अगाडि
मोरङ । रातो तारा डट कम,सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नम्बर १२ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रोशनप्रसाद ढकालले वडाध्यक्ष पदमा अत्याधिक भोट ल्याएर विजयी भएका छन्। हालसम्म सो वडामा ३२१७ मत गणना भएको छ ।
पछिल्लो मत परिणामअनुसार वडाध्यक्ष पदमा निवर्तमान वडाध्यक्ष रोशनप्रसाद ढकालले २१३७ मत पाउँदा नेपाली कांग्रेसकी सुजू थापाले ५३२ मत पाएकी छिन् ।
महिला सदस्यमा एमालेकी उम्मेद्वारले १७३९ मत पाउँदा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वारले ७४१ मत पाएकी छिन् ।
दलित सदस्यमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वारले १७०७ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वारले ८०२ मत ल्याएकी छिन्।खुला सदस्यमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले १६२१ र १६९१ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले ७७४ र ६८६ मत ल्याएका छन् ।
कटारी नगरपालिकाको मतगणना अझै हुन सकेन
श्याम राई÷उदयपुर गाईघाट, २ जेष्ठ। रातो तारा डट कम, सहमती कार्यान्यन नभए सम्म मतगणना नगर्ने दलहरुको अडानले कटारी नगरपालिकाको मतगणना अझै हुन सकेको छैन ।
उक्त नगरपालिकाको मतगणना सोमबारदेखि गर्नेतयारी थियो । मतगणना बारे सोमबार बसेको सर्व दलिय बैठकमा दलहरुका प्रतिनिधिले निर्वाचनको दिन भएको हत्या काण्डको जाचबुझ गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन भए पश्चात मात्र मतगणना गर्ने अडान लिएपछि मतगणना हुन नसकेको निर्वाचन अधिकृत राज कुमार राउतले बताए ।
मतदान सकिए लगतै मतदान स्थलमा भएको सामान्य विवादमा कटारी नगरपालिका–१० सोरुङछविसेस्थीत कालिका माध्यामिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा प्रहरीले गोली चलाउदा १९ वर्षिय नविन कटुवालको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादबको अगुवाईमा स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कटारीमा बसेको सर्व दलिय बैठकमा उक्त घटनाको जाचबुझ गर्न उच्च स्तरीय छानविन आयोग बनाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय पश्चात आईतबार सबै मतपेटिकाहरु निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याईएको थियो । सहमती अनुसार छानविन आयोग अझै नबनेकोले मतगणना शुरु नगरीएको नेकपा एमालेका नेता काजी श्रेष्ठले बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया रंगेलीमा
बिराटनगर जेष्ठ २ गते साेमबार । रातो तारा डट कम,रंगेली नगरपालिकाकाे स्थानीय निर्वाचनकाे मतगणनाकाे बिषयमा मतपेटिकामा त्रुटी देखिएकाे भन्दै, मतगणना सन्चालन फेरि स्थगित भएको छ । आजै मतगणनाकाे बिषयमा जानकारी लिनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया रंगेलीको जनता क्याम्पसमा आज बिहन ११ बजे मतगणना स्थल आइपुग्नु भएको थियोे । आजै थपलियाले नेकपा एमाले का उमेदवार दिलिप बगडिया, नेपाली काङ्ग्रेसका उमेदवार माेदराज घिमिरे , नेकपा मओवादीका उमेदवार रफिक आलमा, गठबन्धनका उम्मेदवार पन्नालाल मंण्डल, लगायत स्थानीय राजनीति दलका प्रतिनिधि संग मतपेटिकामा भएको त्रुटि देखिएकाे भन्ने बिषयमा छलफल गर्नु भयो । आजको छलफलमा माेरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल, रंगेली निर्वाचन अधिकृत रामहरी काफ्ले साहयक प्रजिअ महेशराज तिमल्सिना , प्रमुख शान्ति राज काेईराल, लगायकाे उपस्थित रहेको थियो । दलहरूको सर्वदलीय बैठक मा सहमति भए पछि मतगणना सुरु गरिने बुझिएको छ । वडा नम्बर ८ काे मतपेटिकामा सिल नभएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले बिराेध गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहलले मतगणना खुलाउने बिषयमा छलफल भईरहेकाे बताएका छन। (रंगेली अब डेट)
मतगणनाको अहिले आठ बजेको नतिजा अनुसार देशभर कांग्रेस अगि अगि, एमाले पछि पछि,
काठमाण्डौ जेठ २ गते । रातो तारा डट कम,वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणा अनुसार हालसम्म ९२ स्थानको मतको परिणाम आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
अहिले बिहान ८ बजेसम्म ७ सय ५१ स्थानीय तहको निर्वाचनमध्ये नेपाली काँग्रेसले नाएको ज छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले २२, एकीकृत समाजवादीले २, अन्यले १ जनाले प्रमुख पदमा जितेका छन् ।
यस्तै उप प्रमुख उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसले ३९, एमालेले ३०, माओवादी केन्द्रले १४, एकीकृत समाजवादीले ४ र जसपाले १ स्थानमा जितेको जनाएको छ । देशभरका प्रमुख र अध्यक्ष काँग्रेसको अग्रता कायमै छ भने उप प्रमुख र उपाध्यक्षमा पनि काँग्रेसकै अग्रता रहेको आयोगले जनाएको छ ।
एमालेले भने प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा काँग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ ।
अध्यक्षमा मेजर राई र उपाध्यक्षमा पुष्पलाल राई बिजय
श्याम राई÷उदयपुर गाईघाट, १ जेष्ठ । रातो तारा डट कम, उदयपुरको लिम्चुबुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्षमा गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदबार मेजर राई निर्वाचित भएकाछन् । उपाध्यक्षमा गठबन्धन उम्मेदबार कांग्रेसका पुष्पलाल राई निर्वाचित भएकाछन् ।
आईतबार दिउसो मतगणना सकिएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट राई द्धय विजय भएको घोषणा गरिएको थियो ।
अध्यक्षमा विजयी राईले २ हजार ५१ भोट प्राप्त गरेकाछन् । उनले प्रतिद्धन्दी नेकपा ( एमाले) का उम्मेदबार राज कुमार राईलाई ४ सय ६२ मतान्तरले हराएका हुन् । पराजित राईले १ हजार ५ सय ८९ मत ल्याएकाछन् ।
अध्यक्षमा निर्वाचित राईको यो दोश्रो कार्यकाल हो । २०७४ मा पनि उनी नेकपा माओवादीबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उपाध्यक्षमा निर्वाचित पुष्पलाल राईले १ हजार ९ सय ३३ मत ल्याउदा उनको प्रतिद्धन्दी नेकपा (एमाले ) की देव कुमारी कार्कीले १ हजार ७३ मत प्राप्त गरिन् ।
मुख्य निर्वाचन अघिकृत दिपक खनालले राजीनामा दिए
श्याम राइ- गाईघाट –१ जेष्ठ । रातो तारा डट कम,मुख्य निर्वाचन अघिकृत दिपक खनालले राजीनामा दिएकाछन् ।उनले स्वास्थ्थको कारण देखार्ई आईतवार राजीनामा दिएकाछन्। निर्वाचन को काम पुरा नहुदै उनले आयोग समक्ष राजीनामा गरेकाहुन् । निर्वाचनको बेला उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१० सोरुङछविसे स्थित कालिका माध्यमिक विध्यालय मतदान केन्द्रमा प्रहरीको गोली लागेर एक किशोरको मृत्यु भएको थियो। भने कर्मचारीले घाघली गरेको भन्दै त्रियुगा नगरपालिका वडा.न. १२ पुरानो गाईघाट स्थित जनप्रेभी आधारभूत मतदान केन्द्रमा विवाद भएपछि मतदान स्थगीत गरीएकाृ थियो । निर्वाचनको यि दूई घटनाले मुख्य निर्वाचन अधिकृत खनाल निकै तनावमा थिए । उनी बढी तनावमा भएपछि सोही कारण बाट राजीनामा दिएको हुनसक्ने अडकल काटीएको छ । उनको राजीनामा आयोगमा पुगीसकेपनि आयोग ले मुख्य निर्वाचन अधिकृत कसैलाई तोकेको छैन । उदयपुरका सहायक निर्वांचन अधिकृत दिलिय मगरले खनालले राजीनामा गरेको पुष्टी गरेकाछन् । स्वास्थ्थमा समस्या देखाउदै उनले राजीनामा दिएको बताए । उदयपुरमा ८ वटा स्थानिय तह मध्ये त्रियुगा र कटारी नगरपालिका बाहेक अरु ६ वटा मा मतगणना जारी छ । त्रियुगाको १२ वडामा पुःन मतदान कहिले गर्ने बारे अझै टुङगो लागेको छैन । आयोगले त्रियुगाको वडा. न. १२ विवाद समधान गर्न जिल्लामै निर्णय गर्न पत्र पठाएको सहायक निर्वाचन अधिकृत मगरले बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत को राजीनामा ले पुःन निर्वाचनमा समस्या भएको छ ।
युक्रेनमा युद्ध–अपराधको छानबिन हुने
काठमाण्डौ जेष्ठ १ गते । रातो तारा डट कम, (बीबीसी) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषदले युक्रेनमा युद्ध–अपराधको छानबिनका लागिआदेश दिएको छ । युक्रेनको राजधानी किभ र आसपासका क्षेत्रमा रुसी सैनिकद्वारा कथित युद्ध–अपराधको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार परिषदले जाँचको आदेश दिएको हो । रुसी सेनाद्वारा गरिएको हत्याको प्रमाण जुटाउनका लागि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको बीबीसीले लेखेको छ ।
हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय आजबाट लाग्नु हुने
काठमाण्डौ जेष्ठ १ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले जेठ १ गतेदेखि साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय आजबाट लाग्नु हुने भएको छ । इन्धनको मूल्य र महँगीलाई ध्यानमा राखी सरकारले साताको शनिवार र आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि आम नेपाली जनताहरुलाई सेवाको हिसावले अफट्यारोमा पारेकोछ । अहिले सरकारले हप्तै पिच्छे इन्धनको मुल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेकोछ । पछि सट्टा बिदा दिइने गरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, विद्युत, खानेपानी, अध्यागमन, वारुणयन्त्र, टक्सार, लगाएतले तेस्रो दिनदेखि गृह मन्त्रालयले समय निर्धारण गरे बमोजिम सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस विपी समुह पनि पाटीमा हैसियत जमाउदै–देउवालाई आफनै वडामा हरायो
काठमाण्डौ जेष्ठ १ गते । रातो तारा डट कम, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहा,दुर देउवाको वडामा नेपाली काँग्रेस पराजित भएको छ । डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका १ को वडाअध्यक्षमा काँग्रेस विपीका नरेश भण्डारी विजयी हुनुभएको छ । भण्डारीले ६ सय ७३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका चन्द्रबहादुर देउवाले ५ सय ४४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उक्त वडामा काँग्रेस विपीको प्यानल नै विजयी भएको होे । नेपाली काँग्रेसबाट निष्कासित कर्ण मल्ल समूहले नेपाली काँग्रेस विपीबाट चुनाव लडेको थियो ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भालोदिमीर जेलेन्स्की वार्ता गर्न तयार
काठमाण्डौ बैशाख ३१ गते । रातो तारा डट कम, अन्तराष्टिय समचार, युक्रेनका राष्ट्रपति भालोदिमीर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले एक स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै आफू रुसी राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्नका लागि तयार रहेको तर, त्यसमा कुनैपनि मध्यस्थता नहुने बताउनुभयो । उहाँले रुसले युक्रेनबाट सेना फिर्ता गरे मात्रै वार्ता अघि बढ्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
६ वटा महानगरपालिकाका मतगणना सुरु कतै तयारी
काठमाण्डौ बैशाख ३१ गते । रातो तारा डट कम, ६ वटा महानगरपालिकामा मतगणना सुरु गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ । काठमाण्डौ, ललितपुर, पोखरा, वीरगन्ज, भरतपुुर र विराटनगर महानगरपालिकामा मतगणना कतै सुरु भइसकेको छ भने कतै तयारी भइरहेको छ । काठमाडौंमा हिजो राति बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार आज बिहान ८ बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय भएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकामा मतगणनाको समय तोक्न सर्वदलीय बैठक बस्ने तयारी छ । यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा बिहान ९ बजेपछि मतगणना सुरु गर्ने तयारी भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका मतगणना बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा पनि आज बिहानदेखि मतगणना गर्न सुरु गर्ने भएका छन । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मतगणना आजै सुरु गर्ने तयारी छ । अरु धेरै पालिकामा पनि आज बिहानदेखि मात्रै मतगणना सुरु हुनेछ ।
हिजो भएको निर्वाचनमा ६४ प्रतिसत मत खसेको आयोगले जनाएको छ
काठमाण्डौ बैशाख ३१ गते । रातो तारो डट कम,हिजो भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मतदान भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गएराति १० बजेसम्मको तथ्याङ्कले ६४ प्रतिशत मतदान भएको देखाएको समेटेर सुचना जारी गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि १६ जिल्लाका ७७ मतदानकेन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १६ जिल्लाका २८ पालिकाका ४३ मतदानस्थलका ७७ मतदानकेन्द्रमा मतदान स्थगित भएको हो । उक्त स्थानहरूमा आयोगले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मिति र समय यथाशीघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका भने सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
मेयरका उम्मेदवार कोइरालाद्वारा मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन
पूर्वाञ्चल खबर , फोटो राजनीति , मुख्य समाचार , मुख्य समाचार
विराटनगर । रातो तारा डट कम, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनबाट विराटनगर महानगरपालिकाका लागि मेयरका उम्मेदवार नागेश कोइरालालेमतदातालाईधन्यवाद दिएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार कोइरालाले सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवाद दिएका हुन् । कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “लोकतन्त्रको उच्चतम नमुना निर्वाचन हो । यस निर्वाचनले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निकै मद्दत गरेको मैले महसुस गरेको छु । निर्वाचनमा सहभागी भएर मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता, निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पार्टीका नेता, कार्यकर्तालगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभारसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।” कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाएको समेत बनाएका छन् ।
यसैबीच, मेयरका उम्मेदवार कोइरालाले शुक्रबार बिहान विराटनगर–९ ठाकुरवाडी रोडस्थित सरस्वती मावि परिसरमा अवस्थित मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरे । मतदानपछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कोइरालाले आफ्नो जित निश्चित भएको बताए । मतदानमा विराटनगरवासीको उत्साहजनक उपस्थितिले आफू निकै उत्साहित भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
सुन्दरहरैंचामा शान्तिपूर्ण मतदान कार्य सम्पन्न
सामना भट्टराई,मोरङ बैशाख ३० गते । रसतो तारा डट कम, स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत आज सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका सबै वडामा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ। मतदाता शान्तिपूर्ण रुपमा मतदानमा सहभागी भएका छन् ।त्यसैगरी बिहान सुन्दरहरैंचा ७ काे पञ्चायत मावि मतदान केन्द्रमा ११३ वर्षीया महेश्वरा अधिकारीद्वारा पहिलाे मतदान गरेर मतदान कार्य सुरु गरिएको थियो।
मतदानमा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएका छन्। सफा र शीतल मौसम भएकाले मतदानस्थलमा उपस्थित भएका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज भएको छ। यस्तै मतदान कार्य सम्पन्न भएको वार्डबाट मतपेटिका मतगणनाको लागि नगरपालिकाको निर्वाचन आयोगमा लगिने कार्य धमाधम भइरहेको छ।
प्रदेश सभामुखद्धारा मतदान, विकास प्रेमी उम्मेद्धवारलाई जिताउन आग्रह
सुनसरी धरान बैशाख ३० । रातो तारा डट कम, प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले धरानवाट मतदान गर्नु भएको छ । उहाले धरान –१३ स्थित लोटस विद्या मन्दिर स्कुलमा पुगेर विहान ११ वजे पुगेर मतदान गर्नु भएको हो । मतदान पश्चात उहाँले सन्चारकर्मीसग स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले जनताहरुमा उत्साह छाएको वताउँनु हुँदै यो चुनावमा विकास प्रेमी, निष्पक्ष र मन परेको उम्मेद्धवारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।